Izvi ndizvo zvirongwa zveApple zveIOS 12 | IPhone nhau
Izvi ndizvo zvirongwa zveApple zveIOS 12
Mwedzi wapfuura takakuudza iwe kuti makuhwa ekutanga akaonekwa sei nezveApple kukwanisa kumira mupfupi mukuvandudzwa kwesystems dzayo. Ese ari maviri iOS 12 uye macOS 10.14 anogona kusanganisira mashoma maficha pane akarongwa kutarisisa zvakanyanya kugadzirisa uye mukugadzikana kwesisitimu, kuitira kudzivirira kukundikana kwekuchengeteka uye zvimwe zviitiko zvisingafanoonekwi izvo mumakore achangopfuura zvakave zvakajairika.
Chirevo chitsva chakaburitswa neBloomberg chinoburitsa marongero Apple angave nawo neayo anotevera masisitimu anoshanda, ese ari maviri iOS 12 uye macOS 10.14, uye zvinoita sekunge zvinangwa zvakagadzwa zvinogona kupfupikiswa muzviviri: kunatsiridza software mhando uye kusunungura izvo zvitsva pazvinorongwa, pasina kumwezve kunonoka.
Apple inoita kunge yakatama mumakore achangopfuura kubva munzvimbo mbiri idzi, uye zvinoita sekunge mhinduro ndeyokusiya kumanikidzwa kwekubatanidza runyorwa rurefu rwezvinhu zvitsva gore rega. Iyo kambani inoda timu yaFederighi, inoona nezvekuvandudzwa kweese Apple software, uine nguva yekutarisa pane zvemukati kugadzirisa uye zvitsva maficha izvo zvinofanirwa kuvhurwa pasina kumanikidzwa kwekutevedzera runyorwa rurefu rwezvinhu zvitsva izvo Apple zvinomisikidza gore negore.
Sekureva kwaFederighi, makore achangopfuura akave nekuratidzwa nekubatanidza akawanda matsva maficha ayo anokatyamadza vashandisi uye anoita kuti makwikwi aite senge anononoka. Asi izvo zvakakonzera nguva dzekupedzisira dzaisakwanisika kuzadzikiswaEya, idzi nhau dzakanonoka kana kutangwa pasina kuve 100% yakagadzirira zvakadaro.
Nekudaro, usavhunduke, nekuti izvi hazvireve kuti hakuzove nenhau mushanduro nyowani dzinosvika mushure mezhizha. Semuenzaniso, iyo Stock Market kunyorera ichavandudzwa, uye iyo Usakanganise modhi, yatove nemakore akati wandei kuseri kwayo, ichave yakagadzirirwa zvimwe sarudzo. senge kugona kuramba mafoni kana kunyaradza zviziviso. Iye anodawo Siri kuti iwedzere kubatanidzwa mukutsvaga kweIOS, uye icho chokwadi chakawedzerwa chinogona kushandiswa mune yakawanda-mushandisi maitiro.
Animoji icharamba ichiwedzera muhuwandu hwevatambi uye mashandisiro avo achave ari nyore,Pamusoro pekutorawo ivo kuenda nePadad nemhando nyowani dzinenge dziine nyowani yeFace ID kamera. Apple inoda iyo Animoji kuti ibatanidzwe muFaceTime yekushandisa panguva yevhidhiyo mafoni.
Pachave zvakare neIOS nyowani yePadad iyo inononoka, senge mukana wekushandisa akati wandei windows mukati mekushandisa kumwe chete, kunyangwe uine maviri windows echimwechete application yakavhurika padhuze nepadhuze. Dzimwe nhau maererano neApple Penzura mashandiro uye iko kunyorera kweMail kwaizononoka zvakare maererano neiyi Bloomberg mushumo. Asi lIko kugona kumhanyisa iOS maapps paMac anoramba achienda, pasina kunonoka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Izvi ndizvo zvirongwa zveApple zveIOS 12
Iyo yakanaka yekuvandudza yeIphone X ichave yekuisanganisira senge iyo iyo isingade kutsvedza kana yangovhurwa. Ndokunge, kana ikakuziva iwe kana iwe ukapinda kodhi yacho zvakananga, zvidhori zvemapurogiramu zvinoonekwa.
mai vako vanondida akadaro
Izvo hazvisati zvatowanikwa muchikamu chekuwanika / bhatani rekutanga ???
Pindura amai vako vanondida
Android P inogadzirira kusvika kweiyo "notch"
Yekupedzisira zvipo zveZuva raValentine